तपाइको पैतालामा कस्तो छ चिन्हहरु ?
September 21, 2019 Purakhabar News
हातका रेखामा हेरेर मानिसको भविष्यवाणि गर्ने कुरा सवैलाई थाहा भएकै विषय हो । ज्योतिषहरुका अनुसार हातमा भविष्य बताउने रेखाहरु हुन्छन् । यति मात्र होइन, शरीरका विभिन्न भागका चिन्ह, बनौट र रेखाका आधारमा मानिसको भाग्य र स्वभाव निर्धारण गर्ने समेत उनीहरु बताउँछन् । हातको रेखा जस्तै खुट्टाका रेखाले पनि मानिसको स्वभाव र भाग्य विश्लेषण गर्ने समुन्द्र शास्त्रमा उल्लेख छ । पैतालामा कस्तो चिन्ह, बनोट वा रेखा भए मानिसको स्वभाव कस्तो रहन्छ ? १. शास्त्र अनुसार खुट्टाको कान्छी औंलाको फेंदमा माथितिर गएको रेखा छ भने त्यस्ता ब्यक्तिहरु भोगी र विलाशी हुन्छन् ।…
‘कबड्डी ३’ को आक्रामक व्यापार, करोड बढी कलेक्सन
काठमाडौं – हास्यप्रधान चलचित्र ‘कबड्डी ३’ ले रिलिजको दुई दिनमा ३ करोड २५ लाख बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेको छ । पहिलो दिन १ करोड ४७ लाख कमाएको यो फिल्मले शनिवार झनै उत्साहित व्यापार ग¥यो । दशैँ नजिकिँदै गर्दा रिलिज भएको यो फिल्मले बक्स अफिसमा दर्शक तान्न सफल भएको छ । लामो समयपछि हलमा नेपाली चलचित्र हेर्न दर्शकको भीड लागेको हो । वितरक कम्पनी स्टेशन फाइभका अनुसार यो फिल्मले दुई दिनमा अन्य फिल्मले कमाएको पुरानो रेकर्ड तोड्न सफल भएको छ । यो फिल्मले शुक्रबार र शनिबार उत्साहजनक व्यापार गरेको छ ।…
कागजात हराउँदा १८ महिना जेल
September 21, 2019 September 21, 2019 Purakhabar News
गोपाल भण्डारी कपिलवस्तु : रोजगारीका लागि भारतको पंजाव गएका एक युवा १८ महिने जेल जीवन बिताएर फर्किएका छन्। आफ्नै देशमा रोजगार नपाएपछि रोजगारीको अवसर खोज्दै भारतको अमृतसर पुगेका वाणगंगा नगरपालिका– २ का २५ वर्षीय डिलाराम थारुले बिनाकारण जेल जीवन बिताउन बाध्य भए। १८ महिने जेल जीवन बिताएपछि भारतस्थित नेपाली दूतावास र दूतावासका एसएसपी प्रकाश अधिकारीको सहयोगमा उनी शुक्रबार घर फर्किएका हुन्। दूतावासबाट एसएसपी अधिकारीले डिलारामलाई शुक्रबार राति तौलिहवास्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बुझाएका थिए। प्रहरीले रातिनै डिलारामलाई उनका काका गणेश चौधरीको रोहवरमा आमा रीमा थारुलाई बुझाइएको प्रहरी नायव उपरीक्षक सुनील मल्लले बताए।…
किन पछि हटे बामदेव, रवीन्द्र अधिकारीको निर्वाचन क्षेत्रमा हार्ने डरले त होइन ?
काठमाडौं : नेकपा नेता वामदेव गौतमले मंसिर १४ मा हुने उपनिर्वाचनमा कास्की २ बाट नउठ्ने घोषणा गरेका छन्। गौतमले शनिबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकमा स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारीको निर्वाचन क्षेत्रमा आफूले उम्मेदवारी नदिने घोषणा गरेका हुन्। ताप्लेजुङ हेलिकप्टर दुर्घटनामा अधिकारीको निधिनपछि कास्की २ खाली छ। ‘मलाई कास्कीबाट निर्वाचनमा भाग लिन अनुरोध गर्नुहुने हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्षद्वय कमरेडसहित पार्टीका समस्त सहयोद्धाप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु’, उनले भनेका छन्। उनले उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा आफूले उम्मेदवारी दिँदा पराजित हुन सक्ने भय पनि व्यक्त गरे। ‘यसअघि प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि आफ्नो पुरानो निर्वाचन क्षेत्र बर्दिया–१…
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले मरेको एक वर्षमा पनि दिएन रकम
दमौली : व्यास ११ निवासी बुद्धि केसी रोजगारीका लागि २०७३ पुस १ गते युएई गए। वैदेशिक रोजगारी जानुपूर्व उनले काठमाडौंमा १० लाख रुपैयाँको जीवन बिमा गराए।केसीमा क्यान्सर रोग देखिएपछि कम्पनीले नेपाल फर्काइदियो। नेपाल आएर बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा उपचार गराएका उनको २०७५ असार ३२ गते मृत्यु भयो। मृत्यु भएलगत्तै परिवारले केसीले जीवन बिमा गराएको प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको दमौली शाखामा बिमा रकम माग गर्दै निवेदन दिए। तर निवेदन दिएको एक वर्ष बित्दा पनि कम्पनीले बिमा रकम दिन अस्वीकार गरेको छ। कम्पनीले बिमाको शर्त उल्लंघन भएको भन्दै मृतककी पत्नी निर्मलालाई…
४ असोज, गौरीफन्टा। नजिकिँदै गरेको दशैँ, तिहार र छठजस्ता मुख्य चाडपर्वका बेला भारतबाट रोजगारी गरेर फर्किने नेपालीको सीमा क्षेत्रमा सहज र सुरक्षित आवागमनका लागि भारतीय पक्षले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । शनिबार भारतको गौरीफन्टामा भएको दुई देशबीचको सीमा सुरक्षा समन्वय बैठकमा भारतकातर्फबाट सहभागी सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी), भारतीय कष्टम तथा अन्य निकायले चाडपर्वका बेला घर फर्किने नेपालीको यात्रा सुरक्षित बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ३५ गण झलारीका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वीरसिंह साहुले जानकारी दिए । उनले चाडपर्व लक्षित नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा उच्च…
बामदेव कास्की २ को उपचुनाव नलड्ने जिकिर
४ असोज, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता बामदेव गौतम कास्की २ बाट चुनाव लड्ने योजनाबाट पछि हटेका छन् । शनिबार बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकमा गौतमले उपचुनाव नलड्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । यद्यपि यसलाई औपचारिक धारणाको रुपमा नलिने र थप अध्ययन गरेर मात्र निर्णयमा पुग्ने सहमति भएको एक सचिवालय सदस्यले बताएका छन् । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको १५ फागुनमा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि रिक्त भएको कास्की २ मा उपचुनाव हुँदैछ । यहाँ गौतम उठ्ने तयारी थियो । स्रोतकाअनुसार पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरुले गौतमलाई टिकट…
काठमाडौं : भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा जर्मनी कम्पनी म्युनिखलाई दिने भएको तयारी गरिएको छ। रूपन्देहीको भैरहवामा निर्माण भइरहेको यो विमानस्थल आगामी डिसेम्बरभित्रै निर्माण पूरा हुनेछ। तयारी पूरा गरेर त्यसको तीन महिना (मार्च) भित्रै सुरु गराउने योजना रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले शनिबार पत्रकारलाई जानकारी गराए। उनका अनुसार यो दुई देशका सरकार–सरकार (जीटूजी)मा मोडलमा सञ्चालन गरिनेछ। यो विमानस्थल सञ्चालन गर्न म्युनिखले ठोस प्रस्ताव दिएको छ। यो कम्पनीको प्रस्ताव उपयुक्त भएकाले यसैलाई विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा दिने विषययमा छलफल भइरहेको जानकारी उनले दिए। मन्त्री भट्टराइले म्युनिखको प्रस्तावमा…
भरतपुर महानगरपालिका १६ का वडा अध्यक्ष गुरुङको निधन
चितवन असोज ४ । भरतपुर महानगरपालिका १६ का वडा अध्यक्ष चतुरमान गुरुङको उपचारको क्रममा निधन भएको छ । क्यान्सरका बिरामी गुरुङको शनिबार बिहान पुरानो मेडिकल कलेजमा निधन भएको हो । स्थानीय निर्वाचनमा उनी तत्कालीन नेकपा एमालेबाट विजयी भएका थिए । अध्यक्ष गूरुङ्गको अन्त्यष्टि सोमबार मात्र गर्ने परिवारीक स्रोतले जनाएको छ । अहिले उनको शव भरतपुर अस्पतालमा राखिएको छ । तीन छोराहरु मध्ये दुई छोराहरु वैदेशीक रोजगारीको शिलसिलामा विदेश रहेकोले उनीहरु आएपछि मात्र अन्त्यष्टि गरिने परिवारिक स्रोतले जनाएको छ ।
औद्योगिक विकासका लागि एक आपसमा बाझिएका कानुन सुधार गर्न आवश्यक छ : पर्यटनमन्त्री गिरी
४ असोज, बुटवल । प्रदेश नम्बर पाँचका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरीले औद्योगिक विकासका लागि एक आपसमा बाझिएका कानुनहरुलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको औल्याएका छन । सरकार कानुन निर्माणको काममा लागिरहेको बताउँदै उनले विगतमा भएका कानुनहरु एक आपसमा बाझिँदा विकास निर्माणको कामले तीब्रता पाउन नसकेको उल्लेख गरे । औद्योगिक विकासका लागि आफ्नो अवधारणा प्रस्तुत गर्नका लागि रुपन्देही उद्योग संघले शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गिरीले प्रदेशको औद्योगिक विकासका लागि सरकार नीजि क्षेत्रसँग सधै सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । उद्योगी व्यवसायीहरुको समस्या समाधान गर्नका लागि आफु…